Izilwane eChernobyl: ukuphila ngemva nenhlekelele
Njengoba ingozi ezenzeka eChernobyl, kwase kudlule iminyaka eminingi. Njalo ngonyaka kuleli zwe uze abacwaningi, ososayensi kanye nezivakashi ukuze ubone ushintsho ziye zenzeka. Eziningi zalezi abahambi usitshele ukuthi eChernobyl izilwane zihlukile kusukela abavamile. Bathi ngamehlo ami abonile kwezilwane soguquko lwegciwane singalawuleka nezinyoni. Ososayensi, kunalokho, khuluma ngezinto esinye isithombe, okuyinto okubonakale kule ndawo.
EChernobyl nasezindaweni ezizungezile basonta ezindaweni lapho izinga emisebeni yilona eliphezulu ukuwedlula wonke. Esikhathini kwesibhamu 1986 ngemuva ukuqhuma kulandelwa umlilo, yonke le ndawonye kwaholela yokungcola omkhulu endaweni engaba amakhilomitha angu-40. Ososayensi bathi imithelela kwekhabhoni zilingane iziqhumane 20 eHiroshima. Eminyakeni isikhathi esidlule lo isotopes enamandla kakhulu baye ayetha, izinsalela zabo yabaGqugquzeli inhlabathi kwezulu. EChernobyl futhi izilwane, izitshalo kanye amakhowe ziye ugxile emisebeni ukuze kubo ayisekho izenzo, kodwa kunalokho, ziye zaba umthombo wakhe.
Area ngemva kwale nhlekelele
Kuze 1986, le ndawo yayibizwa ezikhulayo ingqalasizinda ezibhubhisa izindawo zemvelo kanye azixoshe izilwane zasendle. Kodwa ngemva kwaleyo ngozi lapho umuntu isidlulile umsebenzi, imvelo walulama ngokushesha, wabuyela lapha ezihlukahlukene izilwane, kuhlanganise nezilwane ezinkulu ezincelisayo. Amasimu esingenalutho, amadolobha, imizi ingamashumi igcwele izitshalo futhi waqala ukugcwala. Izilwane eChernobyl babezizwa bekhululekile kumuntu.
Phakathi nalesi sikhathi, ososayensi baye babamba ezinye izilwane ukuze uhlole kangakanani umzimba wabo iqukethe izinhlayiya enemisebe. Eminyakeni 90 efakazelwe Roe izinyamazane sibalo cesium-137 liphenduka, beyizidlova izinga izikhathi 2000! Ucwaningo lwamuva nje Okuningi zisikisela ukuthi izilwane namanje kudlulwe kuyinsakavukela by izikhathi 10.
kanjani izakhamuzi indawo okungayi?
Ukuze abacwaningi abaningi futhi abahambi abavamile bavakashela khona ngalezi. Izilwane izidalwa ezisesimweni sokuguquka muva nje lapho cishe ziphinde zenzeke. Cishe zonke izilwane zihlale zinokudla ifomu evamile, ukuthi akekho kuyabethusa futhi kuphazamisa. Kuphela abameleli izinyoni, ikakhulukazi Swallows, kukhona ezinye izakhi zofuzo okuqondiswa ezihlobene ne Umdwebo. Yiqiniso, emzimbeni akubo bonke uhlala amazinga aphakeme ngemisebe, ngoba namanje izilwane eChernobyl. Izithombe ezithathwe kamuva, abonisa ukuthi iningi izilwane ngokusobala angiguquki.
Kufanele kuqashelwe ukuthi ngokushesha ngemva kwale nhlekelele, lapho uthuli enemisebe kwaba yonke enye indawo kule ndawo, kukhona amacala wezakhi. Ososayensi baye eqoshiwe gigantism, kukobana iba yifitjhani khulu, futhi neziqu kungavamile, kodwa ushintsho olunjalo ziye zenzeka, ngokuyinhloko, siphathelene nezitshalo.
Abahlala kule ndawo?
Ngesikhathi sivakashele le ndawo endleleni ungahlangana eChernobyl izilwane bakhangwa ubuhle bemvelo. Kuyinto ngiyabonga kubo ukuthi le ndawo kubonakala imilingo. Ngokwesibonelo, lapha ngaphesheya inyamazane ngomusa, nemihlambi amaphiva, izingulube zasendle kanye Roe izinyamazane. Futhi, iqhwa kungabhekwa njengokuvikela lynx yagijima, ukubona ngamehlo ayo sempisi. Ngaphezu izilwane, iyikhaya izinyoni. Emaxhaphozini isibonisi siphile imihlambi yonke izindwandwe, ahlanzekile agcwele izinhlanzi namahansi kanye amadada. Ayikho isimanga kancane ukuthi kukhona omnyama crane, ngoba manje siyindlala yangempela.
Liyini iqiniso ngale ndaba
Ngokuphambene okulindelwe yesayensi, ngoba ngaso sonke isikhathi ngakho akekho hhayi zaneliswe soguquko lwegciwane singalawuleka Izilwane eChernobyl. Uma avele yimuphi izilwane futhi kwezinso ngokomzimba, kungenzeka baye bafa, ekubeni ukudla ezidla eziningi. Ubufakazi bubonisa ukuthi ngokwejwayelekileyo zinhlobo kungukuthi soguquko lwegciwane singalawuleka bedle isotopes. Ngenxa emisebeni enamandla zangokwasemuva zezinhlelo eChernobyl futhi alihlalwa muntu ngabantu, ukuze le ndawo isibe engcwele ngempela kunothile izilwane zasendle. Ososayensi baye basebenza ukubala zezilwane ezincelisayo nezinyoni ezihlala endaweni enemisebe. Ngenxa yalokho, kwabonakala enjalo izilwane ezingavamile ezifana amabhere, izimbila zinyathi, ama-lynx, imithini ngisho lo Przewalski ihhashi. Lesi sakamuva lapho esezinzile lapha ngokukhethekile. Uma sikhuluma izinyoni, izilwane zabo kwaba ngaphezu ezincelisayo. Ekupheleni ngokubala kwathi kule ndawo bahlala 61 zezinyoni ezingavamile.
Kodwa alikho indawo okungayi uhlala. Izilwane nezinyoni esetshenziswa seduze abantu bashiye indawo. Lezi amajuba enezimpiko, storks.
Man emisebeni esabekayo
Efingqa, kungaba kuqashelwe ukuthi izilwane uzivumelanisa nezimo kakhulu babe ncamashi eChernobyl. Izithombe ezithathwe kule ndawo ukufakazela iqiniso emnandi. Ngaphezu kwalokho, inani labantu mikhulu, okusho esiphethweni sokuthi cishe zonke izilwane indawo okungayi kungaba ozibongayo sempilo enhle.
Phakathi naso sonke lesi sikhathi liye landa izikhathi eziningi eChernobyl zone labantu isilwane. Lezi idatha ukhombise into eyodwa kuphela: I-nezilwane endaweni nendoda sibi kakhulu kunalokho okuboniswa ngemisebe.
Ukhunta Obucashe svinushki ezidliwayo: ukuqoqa noma cha?
Marsh iris flower unkulunkulukazi rainbow - Iris
Uimon isigodi Altai Izintaba: izithombe, incazelo
Biosphere - a ... izincazelo Main
Bird Bunting Remez: izithombe, incazelo, okuqukethwe ekuthunjweni
Eyosiwe Dorado nezinye izindlela ethandwa ukupheka inhlanzi
Inani labantu base-Italy futhi nentuthuko yezomnotho
Iinsetjenziswa zokukhwela ukugqoka izicathulo ihlanganisa uhlamvu
Yekuchumana ngalokho M2TS evulekile